Ukuhlolwa komthelela womshini - i-Yuyao Jera Line Fitting Co., Ltd.
Ukuhlolwa komthelela womshini (i-IMIT) okunye okubizwa nge-mechanical shock test, inhloso yalolu vivinyo ukuthola ukuthi izakhiwo zomkhiqizo zizoguqulwa lapho umkhiqizo ufakwa ochungechungeni lomthelela emazingeni okushisa ajwayelekile. Ngalesi sivivinyo singahlola ukuqina komkhiqizo wethu ngesikhathi sokuhamba noma ukufakwa.
UJera preforms test kwimikhiqizo engezansi
-FTTH ikhebula izibopho
-Low, low and high voltage shear head bolt lug.
-Amabhokisi wokuqedwa kwe-optic optic, amasokhethi
-Fiber Ukuvalwa kwe-splice optical
Ukuhlolwa komthelela kwenzeka ngokushesha futhi kuyalimaza, umonakalo akufanele wenzeke ukuthinta ukusebenza okulungile komkhiqizo ngaphansi kwezinga lokushisa. Imihlangano yomkhiqizo ingabekwa ngaphansi kwemishini yokuhlola kanye nokuhlolelwa umthelela kusuka phezulu nangakwesokunxele, ngendawo yensimbi kanye ne-anvil yobukhulu obuhlukile, isisindo seCylindrical esiwela ngokukhululeka ngebanga elibonisiwe futhi sidilize imikhiqizo evivinyiwe.
Izinga lethu lokuhlola ngokusho kweCENELEC, EN50483-4: 2009, NFC 33-020, DL / T 1190-2012 yezinsiza zokusabalalisa ugesi, kanye ne-IEC 61284 yekhebula le-fiber optic, nezinye izinsimbi. Sisebenzisa ukuhlolwa kwamazinga okulandelayo emikhiqizweni emisha ngaphambi kokuqalisa, nokulawulwa kwekhwalithi yansuku zonke, ukuze siqiniseke ukuthi ikhasimende lethu lingathola imikhiqizo ehlangabezana nezidingo zekhwalithi.